Netflix inowedzera iyo 'Yekupedzisira' chikamu kuti tirege kupotsa chero chinhu | IPhone nhau
La innovation Kubatana kwakakosha pakufambisa masevhisi kuti ubatanidze vashandisi. Zviripachena kuti imwe yemakiyi evashandisi yekugara mune sevhisi zvirimo, asiwo mashandiro ayo sevhisi anovapa. Netflix yagara ichizivikanwa ne nzwisisa uye ongorora manakiro evashandisi uye kuburitsa nyowani yemultimedia zvirimo intuitively. Mumaawa ekupedzisira, Netflix iri kusanganisira chikamu chinonzi 'Yazvino' mune yeApp app uye pane akangwara maTV kwatinogona kuona kuti ndezvipi zvakateedzana uye mafirimu achaburitswa mumavhiki anotevera uye kunyoresa chiyeuchidzo Uye zvakare, isu tinogona zvakare kuona izvo zvemukati zvakaburitswa svondo rimwe chetero.
Wedzera zviyeuchidzo zvekuuya kwemukati paNetflix
Basa racho rinoratidzwa senzvimbo nyowani inonzi 'Chekupedzisira'. Iyo parizvino iri mune yakangwara TV vhezheni uye iri kutanga kuoneka pane mamwe maIOS. Muchikamu chino tinokwanisa kuona mazita ezvemitambo nemabhaisikopo akasvika svondo ratiri, iwo achauya muvhiki imwechete uye ayo achaburitswa muvhiki rinotevera. Saka, uye zvichibva pamagariro ekuravira wega, Tichava nezvikamu zvinosvika paNetflix zvinoenderana nezvatinoda.
Tinogona kuwedzera zviyeuchidzo kuti tizivise yekuburitswa kwemwaka kana kusvika kwezita ratiri kuda uye parinoburitswa paNetflix tichagamuchira ziviso. Iyi nzvimbo yakakosha kuitira kuti vashandisi vasarasikirwe iko kutsamira pane sevhisi zvichienderana nezvinodiwa zvavo, maererano nekwavanobva mukati mekambani. Zvinotarisirwa kuti mumwedzi iri kuuya Netflix ichawedzera nzvimbo iyi mune ese mashandisirwo emidziyo yemafoni, kuitira kuti isvike nhamba yepamusoro yevashandisi inogoneka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Netflix inowedzera iyo 'Yazvino' chikamu kuti tirege kupotsa chero chinhu
SYMFONISK mutauri wongororo kubva kuKEA uye Sonos